Ny filaharan'ny iraka | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny tenin'i Jesosy tamin'ireo mpanara-dia azy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty
Ilay teny hoe "ny baikon'ny iraka" dia matetika milaza ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio 28,18: 20: "Ary Jesosy dia nanatona ka nanao taminy hoe: Efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy et earth an-tany. Koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra: manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao. Ary indro, momba anao isan'andro Aho mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. »
Efa nomena ahy ny hery rehetra any an-danitra sy ety an-tany
Jesosy dia "Tompon'ny rehetra" (Asan’ny Apostoly 10,36) ary izy no voalohany amin'ny zavatra rehetra (Kolosiana 1,18 f.). Raha mandray anjara amin'ny asa fitoriana na evanjelika ny fiangonana sy ny mpino, na inona izany teny izany, ary manao izany tsy misy an'i Jesosy, dia tsy hahomby izany.
Ny iraka avy amin'ny fivavahana hafa dia tsy ekeny ny hahalehibe azy ka noho izy ireo tsy manao ny asan'Andriamanitra. Izay sampana Kristianisma izay tsy mametraka an'i Kristy ho loha laharana amin'ny fanaony sy ny fampianarany dia tsy asan'Andriamanitra. Talohan'ny fiakarana any amin'ny Ray any an-danitra, dia nanao ny faminaniana i Jesosy: "... dia hahazo ny herin'ny Fanahy Masina izay ho tonga aminao ary ho vavolombeloko ianao" (Asan’ny Apostoly 1,8). Ny asan'ny Fanahy Masina ao amin'ny iraka dia ny fitarihana ny mpino mba hijoro ho vavolombelona momba an'i Jesoa Kristy.
Andriamanitra izay mandefa
Ao amin'ny faribolana Kristiana, ny "misiôna" dia nahazo dikany maro samihafa. Indraindray izy io dia niresaka tranobe iray, indraindray ho amin'ny iraka ara-panahy any an-tany hafa, indraindray amin'ny fananganana fiangonana vaovao, sns ... Ao amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny "misiôna" dia foto-kevitra teolojika ny nanirahan'Andriamanitra ny zanany lahy, ary ny fomba nanirahan'ny raim-pianakaviana azy sy ilay zanakalahy dia nandefa ny Fanahy Masina.
Ny teny anglisy "misiôna" dia manana faka latina. Avy amin'ny «missio», izay midika hoe «mandefa» aho. Noho izany, ny iraka dia manondro ny asa anirahana olona na vondrona iray.
Ny foto-kevitra momba ny "fandefasana" dia ilaina amin'ny teolojia ara-Baiboly momba ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra no Andriamanitra izay mandefa.
«Iza no tokony halefako? Iza no te ho iraka anay? ” nanontany ny feon'ny Tompo. Naniraka an'i Mosesy ho any amin'i Faraona, i Elia ary ireo mpaminany hafa ho any Israely, dia i Jaona Mpanao Batisa, hanambara ny fahazavan'i Kristy (Jaona 1,6-7), izay izy irery no nirahin'ingahy "velona" ho famonjena izao tontolo izao (Jaona 4,34:6,57;).
Nandefa ny anjeliny Andriamanitra mba hanao ny sitrapony (Genesisy 1: 24,7; Matio 13,41 sy ny toerana hafa) ary nandefa ny Fanahy Masiny tamin'ny anaran'ny Zanaka izy (Jaona 14,26:15,26; 24,49; Lioka). "Haniraka an'i Jesosy Kristy" ny Ray amin'ny fotoana hampodiana ny zava-drehetra (Asan’ny Apostoly 3,20: 21).
Jesosy dia nandefa ny mpianany (Matio 10,5), ary nohazavainy fa toy ny nanirahan'ny Ray azy ho eto amin'izao tontolo izao, dia nirahiny ho any amin'izao tontolo izao i Jesosy, ireo mpino. (Jaona 17,18). Ny mpino rehetra dia nirahin'i Kristy. Misionera ho an'Andriamanitra isika ary amin'ny maha-misiônera antsika. Ny Fiangonana Vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao dia nazava tamin'ny fomba mazava ary nanatanteraka ny asan'ny Ray ho mpitondra azy. Ny Asa dia vavolombelon'ny asa fitoriana rehefa niely ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao fantatra. Ny mpino dia "ambassadeur de Christ" (2 Korintiana 5,20) hisolo tena azy eo anatrehan'ny firenena rehetra.
Ny Fiangonana Vaovao ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ny fiangonana mitory. Ny iray amin'ireo olana ao am-piangonana ankehitriny dia ny hoe "mahita ny misiona ho iray amin'ireo asany marobe ny mpivavaka ao amin'ny fiangonana" fa tsy ivony famaritana azy io " (Murray, 2004: 135). Matetika izy ireo dia manalavitra ny tenany amin'ny iraka amin'ny alàlan'ny fanolorana ity andraikitra ity ho any amin'ny "badan manam-pahaizana manokana fa tsy mampita ny mpikambana rehetra ho misiônera" (Ebnda). Raha tokony hovalian'i Isaia hoe "Inty aho, andefaso aho" (Isaia 6,9) ny valiny matetika tsy voavaly dia: «Inty aho! Mandefasa olon-kafa. »
Modely iray amin'ny Testamenta Taloha
Ny asan'Andriamanitra ao amin'ny Testamenta Taloha dia mifandray amin'ny hevitra mahasarika. Ny olona hafa dia ho taitra amin'ny fanatrehan'ny fidirana an-tànan'i Andriamanitra ka nitady "hanandrana sy hahitana ny hatsaran'ny Tompo" izy. (Salamo 34,8).
Ny modely dia ahitana ny fiantsoana hoe "Avia", araka ny aseho ao amin'ny tantaran'i Solomona sy ny Mpanjakavavin'i Sheba. "Ary nony ren'i Solomona ny mpanjakavavin'i Sheba, dia tonga ... nankany Jerosalema izy ... Ary novalian'i Solomona ny zava-drehetra, ary tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka fa tsy nambarany taminy ... ary hoy izy tamin'ny mpanjaka: Marina ny zavatra henoko tamin'ny zavatra nataonao sy ny fahendrenao tany amin'ny fireneko » (1 Mpanjaka 10,1: 7). Ny foto-kevi-dehibe ao amin'ity tatitra ity dia ny fitarihana ny olona mankany amin'ny toerana afovoany mba hanazavana ny marina sy ny valiny. Ny fiangonana sasany amin'izao fotoana izao dia manao modely toy izany. Ara-dalàna izany, fa tsy modely tanteraka.
Matetika ny Isiraely dia tsy nalefa ivelan'ny sisin-taniny mba hijoro ho vavolombelona momba ny voninahitr'Andriamanitra. "Tsy anjarany ny mandeha any amin'ireo firenena sy mitory ny fahamarinana nambara nankinina tamin'ny vahoakan'Andriamanitra" (Peters 1972: 21). Rehefa nandefa hafatra avy tany amin'ireo bisy ho any amin'ireo mponina non-Isiraita tao Niniveh Andriamanitra dia nampahatahotra i Jona. Ny fomba toy izany dia miavaka (Vakio ny tantaran'ity iraka ity ao amin'ny Bokin'i Jona. Mitoetra ho fampianarana ho antsika ankehitriny izany).
Ireo modely amin'ny Testamenta Vaovao
"Io no fiandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra" - toy izany no nanamafisan'i Markus, mpanoratra voalohany ny filazantsara, ny tontolon'ny fiangonana Vaovao. (Marka 1,1). Izy io dia momba ny filazantsara, ny vaovao tsara, ary ny kristiana dia tokony hanana "firaisana amin'ny filazantsara". (Filipiana 1,5) dia midika fa miaina sy mizara ny vaovao mahafaly ao amin'i Kristy izy ireo. Ny teny hoe "evanjely" dia mifototra ao anatiny - ny fiheverana ny fanapariahana ny vaovao mahafaly, ary fanambarana ny famonjena ho an'ireo tsy mino.
Tahaka ny sasany izay voataona ho any Israely noho ny lazany fohy dia fohy toy izany ihany koa no nanintona an'i Jesosy Kristy noho ny lazany sy ny fahaizany malaza. «Ary vetivety dia niely eran'ny tanànan'i Galilia ny vaovao momba azy (Marka 1,28). Hoy i Jesosy: "manatona ahy" (Matio 11,28), ary "Manaraha ahy!" (Matio 9,9). Ny maodelon'ny famonjena ho avy sy manaraka dia mbola manan-kery. I Jesoa no manana tenin'ny fiainana (Jaona 6,68).
Fa maninona no misy ny iraka?
Nanazava i Marka fa "tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra" (Marka 1,14). Tsy ny fanjakan'Andriamanitra irery ihany. Nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy fa "ny fanjakan'Andriamanitra dia toy ny voan-tsinapy izay nalain'ny olona iray ka namboleny tao amin'ny zaridainany; dia nitombo izy ka tonga hazo, ary ny voro-manidina nonina tamin'ny rantsany » (Lioka 13,18-19). Ny foto-kevitra dia ny lehibe dia lehibe ho an'ny vorona rehetra, fa tsy karazana iray ihany.
Tsy mitokana ihany ny Fiangonana, toy ny fihaonan'ny Isiraely. Tafiditra ao izany ary ny hafatry ny filazantsara dia tsy ho antsika fotsiny. Tokony ho vavolombelony isika "hatrany amin'ny faran'ny tany" (Asan’ny Apostoly 1,8). "Nandefa ny Zanany" ho antsika Andriamanitra mba hahafahantsika ho tonga zanany amin'ny alàlan'ny fanavotana (Galatiana 4,4). Ny famindrampon'Andriamanitra manavotra amin'ny alàlan'i Kristy dia tsy ho antsika irery ihany, "fa ho an'izao tontolo izao koa" (1 Jaona 2,2). Isika izay zanak'Andriamanitra dia nirahina ho amin'izao tontolo izao ho vavolon'ny fahasoavany. Ny asa fitoriana dia midika fa "eny" amin'ny zanak'olombelona, ​​"Eny, eo aho ary eny, te hamonjy anao aho".
Tsy asa tokony hotanterahina fotsiny izany fandefasana an'izao tontolo izao. Fifandraisana amin'i Jesosy no maniraka antsika hizara "ny hatsaram-pon'Andriamanitra izay mitarika amin'ny fibebahana" amin'ny hafa (Romana 2,4). Ny fitiavan'i Kristy ny fangorahana ao amintsika no manosika antsika hizara ny filazantsaran'ny fitiavana amin'ny hafa. «Mampirisika antsika ny fitiavan’i Kristy» (2 Korintiana 5,14). Manomboka ao an-trano ny iraka. Ny zavatra rehetra ataontsika dia mifandray amin'ny asan'Andriamanitra izay "nandefa ny Fanahy tao am-pontsika" (Galatiana 4,6). Nirahin'Andriamanitra ho an'ny vadintsika, ny fianakaviantsika, ny ray aman-drenintsika, ny namantsika, ny mpifanila trano, mpiara-miasa sy ireo mifanena aminy eny an-dalana isika, amin'ny olona rehetra.
Ny fiangonana tany am-boalohany dia nahita ny tanjony tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny Lehibe Lehibe. I Paoly dia nihevitra ireo izay "tsy nanana ny tenin'ny hazo fijaliana" ho olona very izay raha tsy notorina taminy ny filazantsara (1 Korintiana 1,18). Na inona na inona ny fandraisan'ny olona ny filazantsara na tsia, ny mpino dia tokony ho "hanitra nataon'i Kristy" na aiza na aiza alehany (2 Korintiana 2,15). Manahy i Paoly fa maheno ny filazantsara ny olona ka heveriny fa haparitaka ny andraikitra naparitany. Hoy izy hoe: «Fa tsy afaka midera ny marina aho fa mitory ny filazantsara; satria tsy maintsy manao izany aho. Ary lozako, raha tsy mitory ny filazantsara aho! » (1 Korintiana 9,16). Soso-kevitra ny tenany fa izy dia "mpampindram-bola amin'ny Grika sy tsy Grika, fa hendry sy tsy manam-pahefana ... hitory ny filazantsara" (Romana 1,14-15).
Manana faniriana hanao ny asan'i Kristy avy amin'ny fankasitrahana feno fanantenana i Paoly, "satria ny fitiavan'Andriamanitra dia arotsaka ao am-pontsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina" (Romana 5,5). Ho azy dia tombon-tsoa amin'ny fahasoavana ny ho apôstôly, izany hoe, izay "nirahina" rehefa manao ny asan'i Kristy isika. "Ny maha-kristiana dia misiônera amin'ny natiora na mandà ny raison d'etre", izany hoe ny tanjony manontolo (Bosch 1991, 2000: 9).
Tahaka ny fiaraha-monina maro ankehitriny dia tsy mankahala ny filazantsara izao tontolo izao tamin'ny andron'ny Asa. "Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo tamin'ny hazofijaliana, fanelingelenana amin'ny Jiosy, fahadalana amin'ny hafa firenena" (1 Korintiana 1,23).
Tsy noraisina kosa ny hafatra kristiana. "Ny nahatoky, toa an'i Paul," dia voasarika mafy tamin'ny lafiny rehetra, saingy tsy natahotra ... natahotra izy ireo, nefa tsy kivy ... enjehina izy ireo fa tsy nilaozana " (2 Korintiana 4,8: 9). Indraindray ireo vondron'olona mpino rehetra dia mihemotra amin'ny filazantsara (2 Timoty 1,15).
Tsy mora ny nandefasana azy ho eto amin'izao tontolo izao. Matetika ny kristiana sy ny fiangonana dia nisy "nisy teo amin'ny loza sy ny fahafahana" (Bosch 1991, 2000: 1).
Tamin'ny fankatoavana sy fanararaotana dia nanomboka nitombo ny isan'ny fiangonana ary ny fahamatorana ara-panahy. Tsy natahotra izy ho feno fihantsiana.
Ny Fanahy Masina dia nitarika ny mpino hanana fotoana ho an'ny filazantsara. Nanomboka tamin'ny toriteny nataon'i Petera ao amin'ny Asa 2, dia naka fotoana ho an'i Kristy ny Fanahy. Ireo dia ampitahaina amin'ny varavarana ho amin'ny finoana (Asan’ny Apostoly 14,27:1; 16,9 Korintiana 4,3; Kolosiana).
Nanomboka nanaparitaka ny filazantsara tamim-pahasahiana ireo lehilahy sy vehivavy. Ny olona toa an'i Filipo ao amin'ny Asa 8 sy i Paoly, Silasy, Timoty, Akila, ary Priszilla ao amin'ny Asa 18 raha nanangana ny fiangonana tao Korinto izy ireo. Na inona na inona nataon'ny mpino dia nataon'izy ireo ho "mpiara-miasa amin'ny filazantsara" (Filipiana 4,3).
Tahaka ny nanirahana an'i Jesosy ho tonga iray amintsika mba hahavoavonjy ny olona, ​​dia nirahina noho ny filazantsara ny "mpino" mba hizara ny vaovao tsara amin'izao tontolo izao. (1 Korintiana 9,22).
Ny bokin'ny Asan'ny Apostoly dia nifarana tamin'ny fomba nanatanterahan'i Paoly ny baikon'ny misiônera ao amin'ny Matio 28: "Izy dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ary nampianatra an'i Jesosy Kristy Tompo tamim-pitiavana" (Asan’ny Apostoly 28,31). Ohatra amin'izany ny fiangonan'ny ho avy - fiangonana manana iraka ampanaovina azy io.
Ny baikon'ny iraka dia ny fanohizana ny fitoriana ny filazantsaran'i Kristy. Nalefa teto amin'izao tontolo izao izy rehetra, tahaka an'i Kristy nirahin'ny Ray. Midika izany fa fiangonana feno mpino mafana fo izay manao ny asan'ny rainy.